စပါးနဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တိုက်စစ်မှာ ဘယ်သူ့ကို ပွဲထုတ်သင့်သလဲ ဆ - Yangon Media Group
စပါးနဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တိုက်စစ်မှာ ဘယ်သူ့ကို ပွဲထုတ်သင့်သလဲ ဆ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လာမည့် စနေနေ့မှာတော့ အက်ဖ်အေဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ် တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါးအသင်းနဲ့ ၀င်ဘာလေကွင်းမှာ ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္တ၀င် ပေါလ်စခိုးကတော့ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ နည်းပြဟိုဆေးမော်ရင်ညိုအနေနဲ့ အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ထက်စာရင် အန်သိုနီမာရှယ် နဲ့ မားကပ်ရပ်ဖို့ဒ်တို့ကို သာ ဦးစားပေးပွဲထုတ်သွားသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပေမယ့်လည်း ချီလီလက်ရွေးစင်သာ ပွဲထွက်ခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူဟောင်းက ပိုချက်တီနိုရဲ့ အသင်းနဲ့ ၀င်ဘာလေမှာ ကစားသွားရမယ့်ပွဲစဉ်မှာ ရိုမီလူလူကာကူဟာ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပွဲထွက် ကစားသမား ၁၁ ယောက်မှာ ပါဝင်ဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ပြီး မော်ရင်ညိုအနေနဲ့ ဘယ်ဂျီယံတိုက်စစ်မှုးနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ တွဲဖက်ကစားစေဖို့အတွက် ဘယ်သူ့ကို ရွေးချယ်သွားရမလဲဆိုတာ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်သွားရန် လိုအပ်နေတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဟိုဆေးမော်ရင်ညိုဟာ ဒီရာသီမှာတော့ မာရှယ် ရပ်ဖို့ဒ် ဆန်းချက် ဂျက်ဆီလင်ဂတ် ဟွမ်မာတာ တို့ကို အသင်းရဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်မှာ လှည့်လည်အသုံးပြုနေခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ပေါလ်စခိုးကတော့ မော်ရင်ညိုအနေနဲ့ မနေ့ညက ဘုန်းမောက်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၂ ဂိုး ဂိုး မရှိနဲ့ အနိုင်၇ရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ မာရှယ် ရပ်ဖို့ဒ်တို့ကို လာမည့် စပါးအသင်းနဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဆိုသွားပါတယ်။
စခိုးက “ကျွန်တော်သာ ဆိုရင်တော့ လာမည့် တော့တင်ဟမ်နဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပွဲစဉ်မှာ ရပ်ဖို့ဒ် နဲ့ မာရှယ် တို့ကိုသာ ကစားစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ မော်ရင်ညိုဟာ ဆန်းချက်ကိုပဲ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် အသုံးပြုသွားမှာပါ။” လို့ပြောသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဆန်းချက်ကို ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို စခိုးက “ဆန်းချက်ရဲ့ ခြေစွမ်းဟာ လုံလောက်တဲ့ ကောင်းမွန်မှု မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင့် သူ့ရဲ့ ကစားပုံဟာ ပြိုင်ဘက်တွေအတွက် မှန်းဆရ လွယ်ကူလွန်းပါတယ်။ သူဟာ တကယ့်ကို ထိပ်တန်းကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို မပြသနိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်အမြင် မာရှယ်နဲ့ ရပ်ဖို့ဒ်တို့ဟာ သူ့ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေပါပဲ။” လို့ဆိုသွားပါတယ်။
ဟိုဆေးမော်ရင်ညိုကတော့ လာမည့် တော့တင်ဟမ်နဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက်အတွက် သေချာပေါက်ပွဲထွက်ခွင့်ရမယ့် ကစားသမား ၃ ဦးပဲရှိတယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်နည်းပြဟာ မနေ့ညက ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲမှာ ဆန်းချက် လူကာကူ မာတစ် တို့ကို အရန်ခုံပို့ခဲ့ပြီး ၀က်ဘရွန်းကို ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်က လူစာရင်းကို ၇ နေရာ အပြောင်းအလဲ လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပေါ့ဘာဟာ ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြသခဲ့ပေမယ့်လည်း မော်ရင်ညိုကတော့ ပေါ့ဘာနဲ့ အခြားကစားသမားတော်တော်များများဟာ စပါးနဲ့ပွဲမှာ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ သေချာတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိမနေဘူးလို့ ဆိုသွားပါတယ်။ “ကျွန်တော့် ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲက ၁၁ ယောက်လုံးကို စပါးနဲ့ပွဲမှာ ပြန်သုံးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားလုံးဟာ အဲဒီပွဲမှာ ကစားချင်ကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့ကြပါတ်ယ။ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အန်တိုနီယို ဗလင်စီယာ နီမန်ဂျာ မာတစ် ရိုမီလူ လူကာကာ တို့ကို အသုံးပြုသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ ၁၁ ယောက်ကလည်း ၀င်ဘာလေမှာ ကစားချင်ပြီး အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။” လို့ဆိုသွားပါတယ်။
​ရော်​နယ်​ဒိုသာ ကမ္ဘာ အ​ကောင်းဆုံး ကစားပါလို့ အခိုင်​အမာ ​ပြောကြားလိုက်​တဲ့ မာဆယ်​လို
လီဗာပူး ဂန္တ၀င် ကစားသမားကြီး အီရန်ရှပ်ရဲ့ ကလပ် ဂိုးသွင်းစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ဖို့ အတွက??
ရာသီဝက် ချန်ပီယံအတွက် အရေးကြီးသည့် ပွဲစဉ်တွင် ရတနာပုံ ကစားသမားနှစ်ဦး ပွဲပယ်ကြောင့် လွဲခေ??
ထိန်းသိမ်းမှု မရှိ၍ ပျက်စီးနေသော မြေထဲမြို့ဟောင်းကို ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှ
ရခိုင်အရေး၏ အရင်းခံမှာ ဖက်ဒရယ်ပြဿနာ ဟုဆို၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြစ်ဖို့ရမည့်အချိန် မဟုတ်၊ ??
Home Alone ပုံစံ ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရန် Ryan Reynolds စီစဉ် လျက်ရှိ